Kitra any Matsiatra Ambony sy V7V: “Manilika kandidà ny federasiona”, hoy ireo seksiona mpifidy | NewsMada
Kitra any Matsiatra Ambony sy V7V: “Manilika kandidà ny federasiona”, hoy ireo seksiona mpifidy
Naneho ny alahelony, ny amin’ny zava-misy eo amin’ny fifidianana izay ho filohan’ny ligy, ao Matsiatra Ambony sy Vatovavy Fitovinany, ireo seksiona. Nambaran’izy ireo fa manao fanilikilihana ny federasiona.
Nivoaka tamin’ny fahanginany, ireo filohana seksion’ny baolina kitra, ao amin’ny ligin’i Matsiatra Ambony (Fianarantsoa, Isandra, Ambohimahasoa, Lalangina, Ambalavao) sy Vatovavy Fitovinany (Manakara, Mananjary, Ifanadiana, Vohipeno), ny amin’ny fanaovan’ny federasiona tery vay manta sy didiko fe lehibe, eo amin’ny fanatanterahana ny fifidianana izay ho filohan’ny ligy, any amin’izy ireo.
Raha tsiahivina, notanterahina, ny asabotsy lasa teo, teny amin’ny Trano bongo Tanjombato, izany, nampanaovin’ny vaomieram-pifidianana nasionaly (Ceni national). Nambaran’izy ireo, tamin’ny fihaonany tamin’ny mpanao gazety fa tsy ekeny ny kandidà tokana, tamin’izany fifidianana izany, tsy manaraka ny lalàna voafaritra, raha ny filazan’ireo. “Tsy ny sata sy ny lalam-pifidianan’ny federasiona no nampiasaina fa ilay “guide electoral”, izay efa notakina ny hanovana azy no mbola nampiasaina ka nahatonga ireo kandidà hafa tsy noraisina”, hoy ny filohan’ny seksiona avy ao Fianarantsoa.
Niarahan’izy ireo nanambara fa manana kandidà, tiana holaniana ny federasiona ka izay no mahatonga izao fanilikilihana izao. Nanamarika hatrany ry zareo avy any Matsiatra Ambony fa tsy nahatratra ny fetr’isa “quorum”, ny mpifidy satria araka ny lalàna, tsy maintsy mihoatra ny antsasa-manila vao afaka alefa ny fifidianana.
Araka izany, lavin’izy ireo marin-drano, ny voka-pifidianana tamin’ny asabotsy lasa teo raha toa ka ankatoavin’ny minisitera sy ny federasiona, izany.
Na izany na tsy izany, hanoratra any amin’ny federasiona iraisam-pirenena (Fifa) sy ny kaonfederasiona afrikanina (Caf) indray izy ireo, hitantara ny zava-misy marina mahakasika ny fifidianana, nataon’ny federasiona amboletra.